भारतीय सेना प्रमुख रावत चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटना, दुर्घटना के कारणले भयो ? - ramechhapkhabar.com
भारतीय सेना प्रमुख रावत चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटना, दुर्घटना के कारणले भयो ?
भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावत सवार हेलिकप्टर तमिलनाडुको कुन्नुरमा दुर्घटना भएको छ । उक्त हेलिकोप्टरमा सेनापति रावतसँगै उनको परिवार पनि सवार रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुलाई उद्धार गरी अस्पताल लगिएको छ ।
दुर्घटनाका बारेमा भारतीय सेनाले भने औपचारिक जानकारी दिएको छैन । दुर्घटना के कारणले भयो भन्ने पनि खुल्न नसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
डब्लूएचओले भन्यो– अहिलेका भ्याक्सिन ओमिक्रोनविरुद्ध प्रभावकारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का एक अधिकारीले विश्वभर अहिले चिन्ता र चासोको केन्द्र बनेको कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनविरुद्ध अहिलेका भ्याक्सिनहरु प्रभावकारी भएको बताएका छन् । अहिलेको भ्याक्सिनले पनि ओमिक्रोनविरुद्ध काम गर्ने प्रमाणित भएको ती अधिकारीले जनाएका हुन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको एक ल्याबमा अहिलेको कोरोना भाइरस भ्याक्सिन फाइजरको आंशिक प्रभाव भएको परीक्षण नतिजा आएकै समयमा डब्लूएचओले बताएको यो विषयलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
डब्लूएचओको चिकित्सक माइक रयानले ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्ध अहिलेका भ्याक्सिनले काम नगर्ने भन्ने कुनै प्रमाण नभएको बताएका छन् । उनले अरु भेरियन्ट र ओमिक्रोनविरुद्ध अहिलेको भ्याक्सिनले बराबर काम गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीसँग भएका खोपहरुका कारण ओमिक्रोन मात्र होइन, अरु भेरियन्टबाट संक्रमित भएकाहरु पनि गम्भीर संक्रमण हुनबाट बचेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘अहिले ओमिक्रोनविरुद्ध यी भ्याक्सिनको काम हुँदैन भन्ने सोच्नु ठिक हुँदैन ।’
उनले सुरुवाती आँकडामा ओमिक्रोन भेरियन्टका संक्रमितको संख्या पनि कम भएको बताएका छन् । यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक भेटिएको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रामक क्षमता बढी भएको बताइएको थियो । नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टका दुई जना संक्रमित भेटिएका छन् ।